कस्तो रहला नेजामा नयाँ नेतृत्वको अबको बाटो ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
कस्तो रहला नेजामा नयाँ नेतृत्वको अबको बाटो ?
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) को चौथों अधिवेशन टेक्ससको हुस्टनवाट पाँचौ अधिवेशन क्यालिफोर्नियाको लस एन्जल्स सम्म आइपुग्दा नेजाले निकै अप्ठयारा अवस्थाहरु पार गरिसकेको थियो । त्यति वेला नै केहि पत्रकारहरुले असन्तुष्टी जनाउँदैं नेजावाट वाहिर रहेको जनाउ दिएका थिए । तत्कालिन अध्यक्ष गौतम दाहालका सामु असन्तुष्टि जनाएका साथिहरुलाई नेजा भित्र पुन समेट्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो, र त्यो चुनौति पनि थियो तर त्यो चुनौती पार गर्न भने दाहालले सकेनन् । अर्थात आफ्नो कार्यकालमा त्यसका लागि ठोस पहल समेत गर्न उनी चुकेको देखियो । तर पनि जे होस् यत्रतत्र छरिएका अन्य पत्रकारहरुलाइ भने उनले नेजामा भित्राउन सफल भए ।
नेपाली कांग्रेशको प्रवासी संगठन जन संम्र्पक समिति संगको उनको आवद्धता र अन्य केहि कारणहरुले गौतम दाहालको कार्यकाल विवाद रहित हुन सकेन । नेजाको दुई वर्षको आफ्नो कार्यकालमा तत्कालीन समस्याहरु प्रति उनी आफ्नो कार्यकालको अन्तमा मात्र केहि गम्भिर देखिएको संकेत देखियो, पुरा कार्यकालमा भने खास त्यसका लागि देखिने गरि पहल गरिएको भेटिएन ।
नेजाको कैयन समस्याहरु ज्यू का त्यू रहेको तत्कालीन अवस्थामा अनुभवी, योग्य र सवैलाई समेटन सक्ने नेतृत्व संस्थाका लागी खट्किसकेको थियो । नेजा दुर्घटनामा पर्न सक्ने आंङ्लन गर्दे पुराना पाका एवं अनुभवी पत्रकार तारा वराल (तारा दाई) लाई अगाडि तत्कालिन लसएन्जल्स अधिवेशनमा सारियो । शुरुमा त तारा दाइ यस कुरामा राजी थिएनन । तर तारा दाईलाई नेतृत्व लिन नेजाप्रति सदभाव भएका केहि विशिष्ट व्यक्तिहरुको दवाव वढन थाल्यो । जसका कारण उनी मन नहुदा नहुदै पनि नेतृत्व लिन तयार भए ।
तारा दाईलाई अगाडि सार्नुमा गौतम दाहालका आफ्ना निजी स्वार्थ थिए थिएनन उनी नै जानुन दाहालले तत्कालीन समयमा ओरालो लाग्न लागेको संस्थालाई एउटा अनुभवी, सवैले मानेको पाका व्यक्त्तिलाई संस्था हस्तान्तरण गर्न खोज्नु नराम्रो चाहि थिएन । त्यो संस्थाको हितमा नै थियो । तर विडम्वना दाहालको उक्त विषय तत्कालीन नेजाका अधिकांश कार्यसमितिका साथिहरुलाई पच्न सकेन । यसका पछाडि दाहालको अदृश्य अरु कुनैं मनसायले पनि काम गरेको हुन सक्दछ तर जे होस् पच्न नसक्नुमा गौतम दाहालले तत्कालीन अध्यक्षका नाताले गरेका केहि गल्तिहरुको नतिजा थियो । सम्भवत गौतमका अलावा अरु कसैले तारा दाईलाई अध्यक्षका रुपमा अगाडि सारेको भए माहौल अर्के हुन पनि सक्थ्यो होला ।
तारा दाईलाई नेतृत्व नदिनका लागी नेजाको तत्कालिन विद्यानलाई हतियार वनाइयो । अध्यक्ष पदका लागी उनी योग्य छैनन भन्ने आट कसैसंग नभएको अवस्थामा विद्यानको लफडा दादागिरी शैलिमा पाँचौ अधिवेशनमा अगाडि आएकै हो । नेजा स्थापनाका लागी रात दिन नभनी खटने तारा दाई विद्यानत अध्यक्ष वन्न अयोग्य भए । संस्थामा आगामी दिनमा पर्न सक्ने दुर्घटनाका वारेमा नसोचेकै हो । कहिलेकाही संस्थागत हितका लागी विद्यान थोरवहुत मोडन पट्टि कसैले ध्यान नदिएकै हो । वास्तवमा आजको फुटको सुत्रपात त्यतिवेला नै भैसकेको थियो ।
मानौ भोलि अमेरिकामा भएका नेपाली लेखन विद्यतहरु नेजाको कुनै पदमा इच्छा गरेमा विद्यानको लफडा अगाडि सार्न मिल्छ वा मिल्दैन ? म त भन्छु संस्थागत स्वार्थ र हितका लागी वाधक विद्यान परिमार्ज गर्न कुनै आइतवार कुर्न पर्दैन । प्रक्रिया मिलाएर फेर्न पर्छ तर एक थरी जसरी पनि अन्तिम अवस्थामा विद्यान परिर्वतन गर्न लाग्ने अर्को थरी आफ्ना मान्छे जिताउन जसरी भए पनि परिर्वतन गर्न नदिने किचलो त्यतिवेला नै भएकै थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा अध्यक्षका उम्मेद्धार भोला आचार्य र गुणराज लुइटेल विचमा एउटा अदृश्य सिण्डिकेट सम्झौता भएको चर्चा सुनियो । उक्त सम्झौतामा तत्कालीन समय भोला आचार्यलाई अध्यक्ष वनाई गुणराज उपाध्यक्ष वन्ने र आगामी चुनावमा गुणराजलाई अध्यक्षमा सहयोग गर्ने आशय छिपेको सुनियो । दुवैजनाले व्यक्तिगत रुपमा उक्त कुरा नस्विकारे पनि उनीहरुको गतिविधिले भने त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको देखिन्थ्यो ।
चुनावका वेला प्रजातान्त्रिक संस्था भित्र रस्साकस्सी चल्नु एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हो । आ आफ्नो माहौलमा अपनाइने हतकण्डा कुनै नौलो होइन । नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावलाई नै नियाल्ने हो भने पनि त्यहा भित्र कुर्सी भाचाभाचको अवस्था निस्केका कैयन उदाहरण छन होलान । चुनावमा भाग लिन जादा हार र जीत दुवै स्किार्न सक्ने छाति लिएर मैदानमा उत्रनु पर्छ । तर नेजाको अधिवेशनमा आफ्नो विचारको जित नहुने वित्तिकै गुटवन्दिमा लागी हाल्ने नै नेजाको सवैभन्दा ठूलो रोग हो । पछिल्लो लस एन्जलसको चुनाववाट आफू एक्लिएको महसुस गर्ने केहि साथिहरुको हर्कतले पनि यहि देखाएको थियो ।
असहमतिमा संस्था संग दुरी वढाउनु एउटा विषय हो तर आफू पराजीत हुदा वा आफ्नो उपस्थिति अलि कम लागेको ठान्दैंमा संस्था नै टुक्राउन उद्दत हुनु अराजकता हो र यो अराजकताको सुरुवात लस एन्जलस सम्मेलन पश्चात तत्कालीन असन्तुष्ट समूहवाट भएकै हो । विभिन्न कारणवस उनीहरु सफल त हुन सकेनन । तर संस्थालाई यसले कमजोर तुल्यायो । गत वर्ष भर्जिनीयामा सम्पन्न नेजाको सम्मेलनमा निम्ताइएका तत्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव उजीर मगरले असन्तुष्ट पक्षले अर्को संस्था खोल्न गरेको प्रयासका वारृमा सार्वजनीक रुपमा नै जनाउ दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ँनेजाको विकल्पमा अमेरिकामा नयाा संस्था जन्माउन प्रयास भएको कुरा साचो हो ।” त्यतिमात्र हैन नेपाल पत्रकार महासंघ यो प्रक्रियावाट पछि हटे पछि केहि साथिहरु प्रेस चौतारीका नाममा मात्र भए पनि अर्को संस्था जन्माउन उद्दत भएकै हो ।
त्यस वाहेक नेजाका कुनै पनि कार्यक्रममा उपस्थिती नजनाउन,े एवं हुदा हुदा एउटा वेला यस्तो सम्म आयो नेजाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु एकै समयमा एन आर एन र नेजाको कार्यक्रमहरु हुदा एन आर एन कार्यक्रममा भाग लिने अनि नेजाको कार्यक्रममा सहभागी नहुने जस्ता अपाच्य गतिविधिहरु पनि भएकै हुन ।
यस्तैं गतिविधि सगैं पछिल्लो एक वर्ष देखि नै नेजाको अधिवेशन कहाा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो । खासमा लस एन्जलसमा अधिवेशनमा नै तत्कालीन अध्यक्षका उम्मेद्धार भोला अचार्य र गुणराज लुईटेलका बीचमा भएको भनिएको भद्र सहमतीले त्यसमा मलजल गरेको संकेत देखिन थालेको थियो । गुणराज उती वेला अध्यक्षवाट पछि हटनुमा पनि आगामी कार्यकालको अध्यक्ष पदको सम्झौता नै थियो भन्ने सुनिन्थ्यो । यसैले पनि उनको उपाध्यक्षको कार्यकाल अध्यक्षको सर्मथनमा नै वितेको थियो । नेजाको अध्यक्ष पदका लागी उनले टेक्सास देखि डि.सी. सम्मको लम्वे यात्रा पनि तय गरेकै हुन । यसर्थ आफ्नो पकड वलियो राख्न उनी भर्जि्नियामा अधिवेशन गर्न चाहन्थे । उनी र भोला आचार्य मिलेर खेलेको खेल ठानेर हो वा अरु क्ुनैं कारणले हो नेजाका अन्य पदाधिकारीहरु तोया दाहाल, विष्णुहरि घिमीरे, शैलेश पोखरेल देखि अधिकांश उनको विपक्षमा उभिए । उनीहरुले वहुमतको आधारलाई समाउदै सियाटलमा अधिवेशन गर्ने निधो गरे जुन गुणराजलाई पचेन । उनलाई यो थाहा थियो कि उनी सियाटलको चुनावी प्रक्रियामा उठे हार्नेछन । तर यहिनेर उनले गम्भिर त्रुटि गरे । एक त संस्थाको उपाध्यक्षको नाताले अधिवेशनमा अनुपस्थिती जनाउदा संस्थामा त्यसले पार्ने असरका वारेमा उनले सोचेनन त्यसवाहेक चुनावी मैदानमा स साना अंक गणितीय आधारले पनि उतार चढाव हुन सक्ने आंकलनको सानो हेक्का पनि उनले गरेनन । तालमेल मिलाएर चुनावमा उत्रेको भए उनले चुनाव जित्न सक्ने संभावना पनि उत्तिकैं थियो । जुन संभावना उनले गुमाए ।
गुनराजको पदको महत्वकांक्षा स्पष्टै देखिन्छ । उनले ँइन्जा” खोले दुइ चार पत्रकारहरुलाई लिएर तर अध्यक्ष वने आफै । उनले पदको लागी संस्था खोलेको हैन भने अरु कसैलाई अध्यक्ष दिन साहस पनि देखाउनु सक्नुपथ्र्यो। जुन उनीवाट हुन सकेन जति भने पनि उनी अध्यक्ष जसरी पनि बन्न चाहन्थे भन्ने कुरालाई यसले मलजल गरेको छ ।
नेजालाई अव आसेपासे विच सिमित राख्दै खाली नेतृत्वको होडमै लाग्ने हो वा नयाा वाटो खोज्ने हो ? नेपालमा गरेको पत्रकारीताको व्याज खादै आफूले आफैलाई वरिष्ठ दज्याउने हो वा नयाा केहि गर्ने हो । अव वाटो पहिल्याउन पहल जरुरी छ । केहि दिन अघि सम्म अमेरिकाका जनमानसमा संघ संस्थाका नाताले आफ्नो साख जोगाउन केहि हद सम्म सफल नेजा अहिले घाटमा राखेको विरामी झै छ । यो घटना पछि हिजो सम्म जन सम्पर्क अमेरिका र एन आर एन अमेरिकाको संस्थागत विसंगतिमा ठडिने अमेरिकि नेपाली पत्रकारहरुको औला आज आफै तिर तेर्सिएको छ । यसलाई अव चिर्न सक्नुपर्दछ । र नढाटि भन्दा यो फुटको जिम्मेवारी हामी सवै हौ । अवको नेतृत्वले यसवाट पाठ सिक्नै पर्छ । नेजामा नया नेतृत्व आएको छ । संस्थामा समस्या नहुने र नेतृत्व फेरिदा केही असन्तुष्टि पनि वाहिर आइनैं हाल्दछ, तर मुख्य कुरा नेतृत्व आइसकेपछि तत्कालिन समयमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्वोधन गर्न गरिएको पहल नैं महत्वपूर्ण हुन्छ । जायज विषयलाई आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पर राखेर हदैं सम्मको लचकता नेतृत्वले देखाउनु कमजोरी नभई त्यो बुद्दिमानी रहन्छ । अहिलेको मुख्य कुरा भनेकैं सबैं नेजामा आएर रम्ने वातावरण बनाउनुनैं हो । आफ्ना दु:ख सुख आफ्नैं साथी भाई माझ सुनाउने पत्रकारको एउटा चौतारी नैं नेजा बन्नुपर्दछ, व्यक्तिगत नाफा वा घाटाको विषय नभई सबैंले अपनत्व अनुभुती गर्न सक्ने थलो नेजा बन्नुपर्दछ । नेजाको गतिविधिसग सदस्यहरु जोडिदा उनीहरुको छाती गर्वले चौडा बन्न सक्ने गरी नेतृत्वले काम गर्न सक्नुपर्दछ । केही विषयहरु छन् भने ती विषयलाई समयमैं सम्बोधन गर्न नेतृत्वले अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्दछ । नेजाको बारे सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको समाचार होइन नेजाले आज रचनात्मक यो कार्य गऱ्यो भनेर सुन्न सक्ने गरी नया कार्यसमितिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । समुदायसग मिलेर समुदायकैं हितमा नेजाले काम गर्नुपर्दछ । अपेक्षा छ नया यो कार्यसमितिले अमेरिका र क्यानडामा रहेका पत्रकारहरुले हाम्रो संस्था भन्न सक्ने गरी यो कार्यसमितिले काम गर्नेछ, र यसका लागि सदस्यको हैसियतले हामी सबैंको खबरदारी रहीरहनेछ ।